Manni Murtii Suudaan qondaaltota tikaa mootummaa duraanii heddu irratti adabbii du’aa murteesse - NuuralHudaa
Manni Murtii Suudaan qondaaltota tikaa mootummaa duraanii heddu irratti adabbii du’aa murteesse
Abbaan alangaa mootummaa Suudaan qondaaltota tikaa mootummaa duraanii heddu, bara bulchiinsa Prezdaant Umar Hasan Al-Bashiir keessa yakka hidhamtoota manneen hidhaa keessatti reebuu, dararuu, namoota mootummaa morman seeran ala ukkaamsanii dhabamsiisuu fi ajjeesuun himatee ture. Haaluma kanaan manni murtii magaalaa Omduruman dhimmicha ilaalaa ture, guyyaa kaleessaa qondaaltota kanneen jidduu 29 irratti adabbii du’aa kan murteesse tahuu gabaafame.
Murtiin kun eega dhagahamee booda lammiileen biyyattii heddu daanditti bahuun gammachuu isaanii ibsatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbileen mirga namoomaa fi waldaaleen ogeeyyota biyyattii akka jedhanitti, murtichi Suudaan keessatti ol’aantumaan seeraa akka kabajamuu fi qondaaltonni mootummaa seeraan ala aangootti fayyadamanii lammiilee akka hin dararre kan barsiisu jechuun ibsan.
Mootummaan Suudaan haaraya hundeeffame hojiilee jijjiiramaa geggeessaa jiru keessaa, qondaaltota mootummaa duraanii ummata biyyattii irratti badii dalagan seeratti kan dhiheessaa jiru yoo tahu, ji’a tokko dura Prezdaantii duraanii Umar Hasan Al-Bashiir irratti adabbii hidhaa waggaa lamaa murteessuun ni yaadatama.
September 22, 2021 sa;aa 6:12 am Update tahe